ဖြစ်ရပ်များ - စက်မှုဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာထုတ်လုပ်သူ
Successfully EXHIBITING the 2019 Apex Asia Show in Shanghai 23-26th Oct,Booth No.# E1-1
Post time: 11-01-2019
The first APEX Asia show wasaresounding success with more than 5,000 visitors viewing the largest collection of powered access equipment ever seen in China. APEX Asia benefitted from being held alongside the International Rental Conference (IRC). IRC attracted more than 450 delegates, including...ဆက်ဖတ်ရန် »
2019 Promat Booth # S5461- ချီကာဂို
Post time: 04-11-2019
See you there Booth S5461, New Product Launch. April 8-11th 2019 Chicago. ဆက်ဖတ်ရန် »
2018 Issa Interclean ပြရန် Booth # 6056-ရှိ Dallas TX
အချိန် post: 11-05-2018
We well exhibited in 2018 Dallas ISSA Interclean show,thanks for your visiting us, looking forward to seeing you again next show. ဆက်ဖတ်ရန် »
124th Canton တရားမျှတသော Booth No.11.3F25 2018 ၌သငျကွညျ့ပါ
အချိန် post: 10-11-2018
To meet our newest products with you, looking forward to see you there! Visit Us: 124th Canton Fair , 1st Phase * Date: 15-19 October 2018 * Location: China Import and Export Fair * Address: 382 Yuejiang Zhong Road, Guangzhou, China * Hall No: 11.3 * Booth No: F25 ဆက်ဖတ်ရန် »
2019 Ara ငှားရမ်းခြင်းပြရန် Booth # 6596
အချိန် post: 09-11-2018
Looking forward to your drop by and visit us, booth # 6596. Feb. 18- 20, 2019 Anaheim Convention Center,CA ဆက်ဖတ်ရန် »
2017 ဂလိုဘယ်အနာဂတ် Mobility ကိုပြရန် & ထိပ်သီးအစည်းအဝေး
အချိန် post: 10-31-2017
ပူးတွဲတရုတ်၏နှစ် 100 ပြည်သူ့ပြန်ကြားရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းကစီစဉ်သည် "2017 Global အနာဂတ် Mobility ကိုဖိုရမ်နှင့်နိုင်ငံတကာပြပွဲ" နှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်လျှပ်စစ်ယာဉ်များ၏နှစ် 100 ပြည်သူ့ကွန်ဂရက်ဟန်ကျိုးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲစင်တာ၌ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါဖိုရမ်၏ဆောင်ပုဒ် "Intelligen ၏ခေတ်ဖြစ်ခဲ့သည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
2017 Apex ပြရန်
အချိန် post: 09-20-2017
အာရှပစိဖိတ်ဒေသ၏ဝေဟင်ပလက်ဖောင်းစျေးကွက်ငှားရမ်းကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကြီးထွားလာအရေအတွက်အားဖြင့်နှင့်အမြင့်မှာဘေးကင်းလုံခြုံပြုပြင်ပေးသောတိုးမြှင့်အရေးပါမှုနှင့်လုပ်သားတွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကမီးလောင်ရာမြန်ဆန်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒီအာရှတိုက်မှာကျင်းပတဲ့ပထမဦးဆုံး Apex ပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှု charger ကိုထုတ်လုပ်သူအဖြစ် AODI့...ဆက်ဖတ်ရန် »
2016 Bauma ပြရန်
အချိန် post: 08-11-2016
ကျနော်တို့က 24 နာရီအတွင်းအဆက်အသွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဟန်ကျိုး Aodi အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်ရေး Co. , Ltd မှ
နေရပ်လိပ်စာ: No.1280 Xincheng လမ်း, Xiaoshan ခရိုင်, ဟန်ကျိုး 311210 တရုတ်
E-mail ကို: info@aodicharger.com
QR Code ကို WeChat